laacibfm.com » Toni Kroos Oo Ka Hor Yimid Qorshihii Mushaarka Ciyaartoyda Looga Dhimayay Iyo Sabab Kale Oo Uu Keenay.
Xidiga khadka dhexe ee xulka qaranka Germany iyo kooxda Real Madrid ee Toni Kroos ayaa ka soo horjeedsaday in ciyaartoyda kubbada cagta mushaarkooda la dhimo saamaynta caabuqa coronavirus awgii.
Toni Kroos ayaa dhinac kale ka eegay in ciyaartoyda mushaarkooda la dhimo si loo badbaadiyo kooxaha kubbada cagta balse taas badalkeeda waxa uu ku dooday in lacagta ciyaartoyda laga dhimayaa ay tahay mid ay dadka uu sameeyay coronavirus uga baahi badan yihiin kooxaha kubbada cagta.
Kroos ayaa ku dooday in haddii ilaa bisha May ay ciyaaraha kubbada cagtu dib u bilaaban karaan ay kooxuhu xal u heli karaan khasaaraha soo gaadhay balse waxa uu tilmaamay in ciyaartoydu ay bixiyaan inta hadda la doonayo in laga jaro mushaarkooda balse ayna kooxaha siin ee ay dadka u baahan caawinta siiyaan.
Toni Kroos ayaa hadal culus ku yidhi: “Mushaar jaristu waxay la mid tahay ku deeqida xididka halbawlaha ah” wuxuuna shaaciyay sababta uu isagu mushaarkiisa oo dhan ku bixin karo taas oo ka duwan qaabka la doonayo in mushaarka loo dhimo.
Toni Kroos oo fikirkiisa sharaxaya ayaa yidhi: “Anigu waxaan u asxaan samaynaya in aan bixiyo mushaarka oo dhan, isla markaana aan qof walba u ogolaano in uu bixiyo wax la dareemi karo. Qof kastaba waxaa laga dalbaday in uu caawiyo halka lagama maarmaanka ah, waxaana jira meelo badan oo lagama maarmaan ah”.
Laakiin Kroos ayaa qiray in saamaynta khasaare ee coronaviuus ay kooxuhu xal u heli karaan haddii bisha May dib loo bilaabo ciyaaraha wuxuuna yidhi: “Kooxo badani waxay lumiyeen dakhligii u qorshaysnaa. Waxay sidoo kale wax walba ku xidhnaan doonaa inta uu ku joogsanayo. Haddii tusaale ahaan ay kubbada cagtu bilaabanto May, hubaashii xal ayaa la heli doonaa”.
Laakiin Kroos ayaa tilmaamay in haddii ilaa jiilaalka ay kubbada cagtu soo laaban waydo in kooxo badani ay saaxada ka bixi doonaan wuxuuna yidhi: “Haddii ay lagama maarmaan noqoto in la joojiyo ilaa jiilaalka, waxaan qiyaasi karaa in kooxo badani ayna socon karayn. Sida aan ognahay taasi kubbada cagta way badali kartaa”.
Dhinaca kale Toni Kroos ayaa sheegay in maamulka kooxdiisa Real Madrid ayna wali wax mushaar dhimis ah ciyaartoyda kooxdiisa ku samayn wuxuuna qiray in dhaqaalaha kooxda sare loo soo qaaday oo ay sidii caadiga ahayd mushaarka u qaataan.